भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत एक युवकमा कोरोना पुष्टि – Health Post Nepal
भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत एक युवकमा कोरोना पुष्टि
२०७७ जेठ २५ गते १५:४७
भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। ज्वरो र खोकी लागेपछि शनिबार राति अस्पताल आएका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) हुप्सेका ३५ वर्षीय पुरुषमा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ पाइएको हो।
उनको स्वाब परीक्षण पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको थियो। हुप्सेकोटको क्वारेन्टाइमा बसेका उनको स्वाब भरतपुर नआउँदै पोखरा पठाइएको थियो। कोरोना परीक्ष गर्दा पोजिटिभ आएको भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. कल्याण सापकोटाले जानकारी दिए।
अहिले उनलाई आइसियुमा राखेर अक्सिजनमार्फत उपचार गरिएको छ। उनको स्वास्थ्य जटिल रहेको डा. सापकोटाले जानकारी दिए। उच्च ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि ती पुरूषलाई क्वारेन्टाइनबाट रिफर गरेर भरतपुर अस्पताल कोरोना अस्पतालमा ल्याइएको थियो। उनी ११ दिनअघि भारतबाट आएको भरतपुर अस्पतालले बताएको छ। घरआएपछि सोझै क्वारेन्टाइनमा बस्न गएका थिए।
यी पुरुषसँग चितवनमा आठजना संक्रमित उपचाररत छन्। त्यसमध्ये चितवनका तीन र नवलपरासीका पाँच जना रहेका छन्। यसअघि तीन जना निको भएर घर गइसकेका छन्।
‭‬ ‭‬ [email protected]com